We refer clients to people whom we have trained, and to professionals who can manage relationship problems နှင့် identity loss
We will not refer clients to people who cannot manage relationship problems, or who only offer dissociation, NLP ဒါမှမဟုတ် ခေတ်သစ် techniques.
မင်းကအများအားဖြင့်ပါ ရင့်ကျက် နှင့် တာဝန်ရှိသည်? ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
မင်းလား ဖော်ရွေ? မင်းမှာသူငယ်ချင်းကောင်းရှိလား ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
မင်းလား စိတ်ချရသော? သင်စတင်တာကိုပြီးအောင်လုပ်ပါသလား။ ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
မင်းလား ရိုးသားတယ်? သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်လှည့်စားခြင်းကိုရှောင်ရှားပါသလား ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
သင်များသောအားဖြင့် တက်ကြွ ဘဝစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းဖို့? ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
မင်းရှိလား လုံလောက်စွာခံစားခဲ့ရသည်? မင်းပြောင်းချင်လား ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
မင်းလုပ်နိုင်လား နည်းလမ်းသစ်များအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သည် နှင့်အသစ်အပြုအမူတွေ? ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
မင်းဆန္ဒရှိလား ရပ် ညည်းညူ၊ ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
မင်းလား ငွေရေးကြေးရေးအရပြင်ဆင်ထားသည် မင်းအနာဂတ်အတွက် ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား စူးစမ်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်း မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းလား ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
သင် ... လုပ်ပါသလား ရည်ရွယ်သည် မင်းရဲ့ကျန်းမာရေး၊ စည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လား။ ဟုတ်သည် – ဖြစ်နိုင်စရာ – မဟုတ်ဘူး
* တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဟုတ်သည် & #8211; ကိုယ့်ကိုကိုယ်3မှတ်ပေးပါ
* တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဖြစ်နိုင်စရာ & #8211; ၁ မှတ်ပဲ
* သင်၏အချက်များကိုရေတွက်။ #8230;
Online coaching . Private Sessions . စုံတွဲနည်းပြ . Advanced Training
နာမည်: Partnership Status: မြို့ / အချိန်ဇုန်:
အသက် - Health: Problem started:
မင်းမှာရှိလား Skype နှင့် PayPal အကောင့်များ?
You want better relationships; you want quality partnership, parenthood ဒါမှမဟုတ် leadership. You want to manage relationship issues (စုံတွဲနည်းပြ; Family Coaching; or Team Coaching). You want contingency planning ဒါမှမဟုတ် disaster relief.
You want success. You want to solve personal or relationship problems at home or at work. You want to manage codependent relationships or end long term အလွဲသုံးစားမှု ဒါမှမဟုတ် manipulation. You want refugee management for people who are lost or disconnected.